Nature Getaway, Room - lokuhlambela yabucala - I-Airbnb
Nature Getaway, Room - lokuhlambela yabucala
Igumbi lakho lokulala e ihostela sinombuki zindwendwe onguCo-Hosting Chile
UCo-Hosting Chile unezimvo eziyi-194 zezinye iindawo.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uCo-Hosting Chile iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yiza kwaye uqhawule kumbindi wendalo kwindawo egqibeleleyo esemazantsi.
Amagumbi amahle eBoutique Hostel (amagumbi ama-3 kuphela) anombono omhle wentaba-mlilo yaseOsorno. I-Hostal Monito del Monte itholakala kwimizuzu engama-20 ukusuka kwi-Vicente Pérez Rosales National Park kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka kumbindi wePuerto Varas.
Eyakhelwe kuyilo oluhle kunye neetayile kunye neenkuni eziqhelekileyo kule ndawo, ihostele ifumaneka kwiimitha ezingama-200 ukusuka kumlambo wasePescado kunye neekhilomitha ezi-2 ukusuka kwindawo ekufutshane ukuya elunxwemeni.
Indawo ekwabelwana ngayo iquka igumbi lokuhlala eline-sofa ekhululekile, isitofu se-pellet, imidlalo, umculo kunye neencwadi ezikhoyo; itafile yokutyela kunye nekhitshi evulekileyo ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye iyafumaneka kwiindwendwe; iterrace entle enetafile nezitulo.
Amagumbi ahonjiswe kakuhle ngezinto eziqhelekileyo zendawo kwaye akanayo iTV, imema ukuphumla okupheleleyo kunye nokuqhawula (kodwa banayo i-Wi-Fi yasimahla yeendwendwe). Zonke iifestile zendlu yi-thermopanel kwaye amagumbi anezitovu zombane ezikhoyo.
Izinto ezinomtsalane kwindawo ezingqongileyo: (Ndicebisa ukuba ujonge isikhokelo sam "Isikhokelo sikaJavier" ukubona ngakumbi kunye noguqulelo lweSpanish-IsiNgesi)
- Ihostele isondele kakhulu kumlambo wePescado kwaye malunga ne-2kms ukusuka kwindawo ekufutshane ukuya elunxwemeni (ukuloba okulungileyo kunye nendawo enhle)
-Kwi-2km nje kude yiPlaya Venado, enye yeelwandle ezimbalwa ezigunyazisiweyo nezisimahla kwiLake Llanquihue.
Ukuba ufuna ukubuyela kwimpucuko ukuze uthathe uhambo, utye into okanye usele, i-19km kude sisixeko sasePuerto Varas, enye yezona ndawo zibalulekileyo zabakhenkethi eChile apho uya kufumana zonke izinto ezilungileyo kwisixeko esinje. inganikeza: a Waterfront omhle, zokutyela imnandi, cafes nemivalo, njengezikhumbuzo nkqu yekhasino wokudlala.
- Ukuthatha umkhombandlela ukusuka eHostele ukuya kwintaba-mlilo yase-Osorno, i-20km isahlula kwi-Vicente Pérez Rosales National Park kunye nazo zonke izinto ezikhangayo ezintle (ezifana nomlambo wasePetrohué kunye ne-Todos los Santos lake), kunye nendlela eya kwi-Reloncaví Estuary.
Umbuki zindwendwe ngu- Co-Hosting Chile
Ndihlala ndifumaneka ukuze ndincede ngayo nantoni na efunekayo ukwenza ukuhlala kube yeyona nto ingcono kunokuba yiyo.